डाक्टर हड्तालपछि ...
किशोर नेपाल बुधवार, आश्विन २५, २०७४
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा नियमन गर्न कानुन निर्माणको लागि संसद्मा विधेयक पेस गरेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलित भए । त्यहीवेला स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले बाह्रौं अनसन थाले । वरिष्ठ पेटरोग चिकित्सक मधु घिमिरेले बिरामीहरूलाई आह्वान गर्दै २६ सेप्टेम्बर (नेपाली मिति) साँझ आफ्नो फेसबुक पृष्ठमा यस्तो लेखे : बिरामीहरू, तपाईंहरू आफ्नो उपचारका लागि सिंहदरवार वा वालुवाटार जानुहोस् र त्यही आफनो उपचारको खोजी गर्नुहोस् । हामी चिकित्सकहरू तपाईंहरूको उपचारका लागि केही गर्न सक्दैनौँ ।
उपचारको क्रममा तपाईंहरूको स्वास्थ्यमा तल–वितल पर‍‍्यो भने, निको भएन भने सरकारले हामीसँग क्षतिपूर्ति वा हर्जाना असूल्नेछ । हामीले सजाय पाउनेछौँ । हामी त्यसका लागि तयार छैनौँ । एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक बन्न थुप्रै पैसा खर्चिनुपर्छ । १० वर्ष स्कुलमा पढ, मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने तयारीका लागि अर्को दुई वर्ष पढ, साढे पाँच वर्ष मेडिकल कलेजमा पढ, अर्को तीन वर्ष स्नातकोत्तर तहमा पढ, त्यसपछि विशेषज्ञ चिकित्सक हुन अर्को तीन वर्ष पढ । के प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवले यति धेरै मिहिनेत गरेका छन् ?
अहिले सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा र शर्तसँग सम्बन्धित त्यो विधेयक फिर्ता लिइसकेको छ । तर, डा. मधु घिमिरेका फेसबुक वालमा लेखिएका कुनै पनि कुरा मेटिएका छैनन् । त्यो वालमा डा. विश्वराज दलीदेखि कानुन व्यवसायी र पचासौं सर्वसाधारणले टिप्पणी गरेका छन् । कुरै नबुझी डा. घिमिरेको वालमा लेख्न पुगेका एक वरिष्ठ मानवअधिकारवादीले कस्सिएको झापड पाएका छन् । पहिले कुरै नबुझी निर्णय गर्ने र पछि कुरै नबुझी निर्णय फिर्ता लिने, यो नेपाल सरकारले श्री ५ को सरकारका पालादेखि नै गर्दै आएको काम हो । कुनै पनि विषयमा सरकारको निर्णय होस् वा, सरकारले ऐन बनाउने क्रममा संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयक ।
सरकारी दस्तावेजहरूको निर्माण सुविचारित हुँदैन । यस्ता दस्तावेजहरूको निर्माण देशले लिएको राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक निर्णयलाई भर्सेलामा पारेर, सरकारी लेखन्दासले जे÷जस्तो दस्तावेज तयार गर्छ, त्यसैलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्छ राजनीतिक नेतृत्वले । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको स्वभाव गजबकै छ । यो राजनीतिक शक्ति त्यत्रो शक्तिवान् राजादेखि डराएन । तर, अहिले सेनासँग र कर्मचारीतन्त्रसँग डराउँछ । देशको कर्मचारीतन्त्र अलिकति मानवीय र अलिकति संवेदनशील भइदिएको भए डा. केसीले १२ पटक अनसन बस्नुपर्ने अवस्था नै उत्पन्न हुने थिएन । कर्मचारीतन्त्रका सन्दर्भमा अत्यन्त विरह लाग्ने मुख्य कुरा नै यही होे ।
तै, दशैंको करिब मध्यभागमा आएर चिकित्सकहरूले हड्ताल फिर्ता लिएका छन् । डा. केसीले पनि अनसन स्थगित गरेका छन् । त्यत्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले नै सबैलाई मनाउने र नमस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने जो कसैले प्रश्न गर्न सक्छ, सबै काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो भने मन्त्रीको त्यो लर्कनको औचित्य कसरी स्थापित हुन सक्छ ? अहिलेको स्थितिमा हामीले मान्नुपर्छ, हाम्रो सरकार र समाज दुवै लोकतान्त्रिक होइन । समाजको आँखामा सरकारको प्रतिष्ठा छैन । सरकारको आँखामा समाज अराजक छ । त्यति मात्र होइन, सरकारले समाजप्रति न्यूनतम जिम्मेवारी पनि राखेको छैन । समाजको प्रतिनिधिका रूपमा
सरकार आफैंले मनोनयन गरेका केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्लेजस्ता पात्रहरूको हुर्मत उतार्ने तरिकाले कानुन बनाउँछ । अब यसलाई के भन्ने ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सकहरूको समाज यता आएर निकै सक्रिय र जिम्मेवार देखिएको छ । तर, यो सक्रियताको कुनै विस्तार छैन । चिकित्सकहरूलाई सरकारले विकट भौगोलिक क्षेत्रमा खटाउने गरेको छ । त्यहाँ खटिएर गएको डाक्टर छट्पटाएर नै फर्किन्छ । औषधि विज्ञानका उपलब्धिहरू नपुगेका ती विरान क्षेत्रमा डाक्टर पठाउनुभन्दा त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने बिरामीलाई सबैभन्दा नजिकको सुविधाजनक अस्पतालमा ल्याउनु नै उपयुक्त हुन्छ । अहिलेसम्म त सरकारले यस्तो सोच र समझदारी देखाउन सकेको छैन । तर, अब देश संघीय हिसाबले विभक्त भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रान्तमा नै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने आशा गर्न पक्कै पाइन्छ । यति हो कि यो आशाको परिपूर्तिका लागि हामीले अरू कति चुनाव खेप्नुपर्ने हो ? भन्न सकिने अवस्था छैन ।
राजनीतिक बेमेलले क्षत्विक्षत् रहेको हाम्रो देशमा दुईथरी मानिस बस्छन् । एकथरी थोरै मानिस छन्, जो सामान्य रोगको पनि नेपालमा उपचार गराउँदैनन् । तिनको चर्चा नगरेकै बेस । राज्यले रकम नदिएसम्म आफ्नो उपचारै नगराउने बिरामीको संख्या पनि कम छैन । राज्य वा अन्य कसैबाट केही नपाएर मर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । यस्तोमा, सरकारले देशमा जति अस्पताल खोल्ने अनुमति दिए पनि पुग्दैन । किनभने, अस्पताल खोल्नेले पैसा नलिई कसैको उपचार गर्नै सक्दैन ।